Ndeipi iyo Chibvumirano Chekugadzirisa Mari? - Nyore Multi Ratidza
Dhijitari Signage & Vhidhiyo Wall Software
Mhinduro inodhura kwazvo pamusika!
Raira Center & Firefighter
Dhijitari Yekugamuchira Screens
Mufashoni & Retail
Maresitorendi & Cafes
Zvikoro & Dzidzo
Vanodzima moto & nzvimbo dzekununura
Cellarman & Waini Dura
Spare Mota Zvidimbu Shopu
Pharmacies & Pharmacy Mapoka
Zvipatara & Emergency services
Podcasters & maBloggi
Tinogona Sei Kubatsira?
Chii chinonzi Chibvumirano Chekubhadhara Mari?
Yakagadzirwa Pa 26 / 02 / 2020
5. Mibvunzo Inowanzo Bvunzwa
← Zvese Zvinyorwa
Chii chinonzi Software Chengetedzo Chibvumirano?
Chibvumirano chekugadziriswa kwesoftware chibvumirano chakajairika chinowanikwa muindasitiri yesoftware. Icho chibvumirano pakati pemutengi nekambani software iyo inovimbisa kuenderera mberi kwekushandisa software pane ese magumo. Izvi zvinoreva kuti iyo inopa software iri kubvumirana kuchengetedza uye kugadzirisa software iyi kuti irambe ichishanda nemazvo uye kuti iri parizvino nehunyanzvi hwekufambira mberi kwetekinoroji uye nezvekuchengetedza zvinetso. Semutengi iwe unosaina chibvumirano chekugadzirisa kuti uve nechokwadi chekuti iwe unosvika kune izvo zvidzoreso kana vongoburitswa.
Semuenzaniso, kungofanana nemotokari yako inoda sevhisi gore rega rega, pamwe nekushandurwa kwemafuta kana kuwedzerwa matairi. Software inodawo yakafanana kugadzirisa kuti ive nechokwadi chakakwana chekuita, nekuti iyo nyika ye tekinoroji inochinja nekukurumidza.
Chii chinonzi EMD's Maintenance Agreement
Isu tinopa mutengi wese mukana wekudyara muchibvumirano chekugadzirisa che Easy Multi Display. Kana iwe ukasarudza kupinda, iwe uchabhadharwa faindi yefizi yemakumi maviri muzana yemubhadharo wesoftware, pane gore rimwe nerimwe.
Kuvhura mukati kunokupa iwe mashoma akawedzeredzwa mabhenefiti:
Zorora uve nechokwadi chekuti sezvo tekinoroji ichifambira mberi, ndozvowo zvinoita EMD Software.
Kana vamwe vatengi vachikumbira kugadzirisa kune EMD, iwewewo uchawana mukana kune izvi zvinowedzerwa zvinhu, senge data nyowani yedhaindi yekubatanidza.
Ko Kana Ndikasasaina Chibvumirano Chekugadzirisa?
Hapana dambudziko! Unogona kuramba uchishandisa Easy Multi Display uye iyo yazvino vhezheni inoenderera ichishanda sezvazviri. Nekudaro, iwe hausi kuzowana mukana wekuwedzera maitiro ayo anogona kuvandudzwa kana kuwedzerwa kune software gore rese. Zvishandiso zvakadaro zvinogona kuve kugona kushandisa akasiyana emhando dze data dhaidhio yako kuratidza.
Kuti uwane mukana wekuwana izvi zvinzvimbo iwe unofanirwa kubhadhara iyo software yekuvandudza mari iyo inogona kunge iri kupfuura makumi maviri muzana yekugadzirisa iwe ungadai wakabhadhara gore rose.
Iwe uchine matambudziko here?
Kana iwe uchiri nemibvunzo kana matambudziko neako kuratidza kana yako marongero, usazeze kushanyira edu FAQ, tora yedu gwara remushandisi kana kubata vatengi vedu pa support@easy-multi-display.com. Isu tichave tichifara kukubatsira uye isu tichava vanofara kunzwa yako maonero!
Dhawunirodha software yedu
Kana iwe uchifarira yedu Nyore Multi Ratidza software, tinya pano kurodha yedu yekuyedza vhezheni. Kuti tigutse makambani ese (kubva kudiki kusvika kune hombe imwe), takagadzira matatu mavhezheni eEasy Multi Display. Yekutanga vhezheni (Imwe Screen) yesoftware yedu inodhura 149 $, yechipiri (Standard) ndiyo inonyanya kufarirwa sarudzo inodhura 499 $ uye pakupedzisira iyo "Enterprise" vhezheni inodhura 899 $. Usazeze kutarisa sarudzo dzedu kana kuti tibate isu kuti uve neruzivo rwakawanda!
Zvimwe zvinyorwa zvatinoda uye iwe zvaunoda!
Kuratidzwa kukuru kwazvo kwaIshe Ram kunopenya muNew York Times Square
Nei tekinoroji ye LED iri ramangwana rezviratidzo zvemukati zvemadhijitari?
Kuumba ramangwana rezviratidzo zvemadhijitari
Logo yeRinyore Multi Ratidza
Virtual Cockpit UK Yakatemwa neMahara
-71-75 Shelton Street, Covent Bindu, London WC2H9JQ
EMD inoparadzirwa muEEC naTekAngel
📞 Mukomana (+33) 679075519
Easy Multi Display Mushandisi Guide V2
Ini ndinoratidza sei kukwidziridzwa?
Mashandisiro atinoita kure kure kwedu?
Maitiro Ekuratidza mameseji?
Mashandisiro ekushandisa 2 skrini paWIN10?
Maitiro Ekuratidza akati wandei mavhidhiyo imwe mushure meimwe?
Nzira yekuratidzira iwo iwo mufananidzo mumwe muzvitoro zvinoverengeka?
Nzira yekuratidzira yako Powerpoint mafaera?
Chii chinonzi port port?
Rakareruka Multi Ratidza rinogona kubatsira iwe kunatsiridza yako data kuona?
Nei uchisarudza kunze kwedhijitari signage system?
Ndeipi digital signage Hardware yandinofanira kushandisa?
7 zvakanakira Dhijitari Ratidza
Mashandisiro ekushandisa masaini edhijitari kune chako chitoro chemishonga?
| Copyright © Easy Multi Ratidza 2021 Dhijitari Signage & Vhidhiyo Wall Software yeMabhizinesi |